छाेरी २ पटक राष्टपति अामा बृद्दाश्रममा – Gorkha Sansar
छाेरी २ पटक राष्टपति अामा बृद्दाश्रममा
गोर्खा संसार २०७५, २१ भाद्र बिहीबार ०१:३३
रातभरिको यात्राले समेत अन्तिम गन्तब्य पेला परेन । उज्यालो भएपछि एक गिलास दूध हालेको बाक्लो चिया पिएर केहीबेर घुक्रुक्क सुत्ने चाहना फिक्का भयो ।
जब गाडीका चक्काहरुले मधेशको माटोमा टेक्यो तब स्थानीय बासिन्दाहरु लोटा उचालेर यत्रतत्र दौडिरहेका भेटिए ।
यस्तो लाग्यो कि, ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा दुई–चार लोटा देखेर नगए ।’
यिनै कुरा गम खाँदै दिउँसोको १२ बजे तिर म सुनसरी जिल्लाको चतरा पुगे ।
चतरामा एउटा वृद्धाश्रम छ, जहाँ सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्या देवी भन्डारीकी ममतामयी आमा मिथिला पाण्डे बस्नुहुन्छ । लामो समयदेखि उहाँ त्यो आश्रममा बस्दै आउनु भएको छ ।
वृद्धाश्रमको गेट भित्र छिरेपछि पलास्टिकको कुर्सिमा एकजना आमा बसिरहेको देखें । आडैमा कपाल फुलेकी अर्की आमालाई देखेपछि पक्का भयो – राष्ट्रपतिकी आमा उहाँ नै हुनुपर्छ ।
सफा लुगामा बसिरहेकी उहाँको स्वभाव शान्त थियो । मैले नमस्कार गरें । समान्यतया हामी नेपालीहरु पहिलो पटक भेट्दा जे जस्तो कुराकानी गर्छौं, त्यही भयो ।
आमाले भन्नुभयो, ‘बाबु तिमि काठमाण्डौबाट आए जस्तो त लागेन ।’
पक्कै पनि लखतरान बनेको यो ‘भातमारा’ शरीर काठमाडौंबाट आए जस्तो थिएन ।
काठमाडौंका मान्छेमा अलिक फुर्तिफार्ती, हाटहुट हुन्छ ।
कमिजको टाँक पनि पुरै नलगाएको, जुत्ताका तुनाहरु फुस्केर लत्रे जस्तो, भालेकट कपाल एकदम कडा जेल दलेर ठाडो परेको । सिङ्गो गाँउ लुट्न जाँदा सात दिन नसुतेको लुटेराको जस्तो जस्तो लाग्थ्यो मेरो शरीर आफैंलाई । मेरो पूर्णकदको हुलिया देखेर सम्मानीय राष्ट्रपतिकि आमा मिथिला पाण्डे डराउनु भएछ ।
मैले भने, ‘आमा, म काठमाडौंबाटै आएको हुँ, फिकर नगरिस्यो ।’
खाइस्यो, बसिस्यो, गइस्यो जस्तै यो ‘नगरिस्यो’ किन भनेको भने, मेरो एकजना ठकुरी साथी थियो । विचरा उ निमुखा थियो । तर एकबारको जुनीमा उसको दावी थियो, ‘म राज खानदानी कुल घरानको हुँ । बोलि वचनमा सभ्यता देखाउनुपर्छ । कहिलेकाँही मलाई ‘खुकुरी रम खाइसिन्छ ?’ भन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिकी आमा मिथिला पाण्डेसँग कुरा गर्दाका वाक्यहरुमा मैले ‘स्यो’ भनिरहे।
जस्तो कि आमा सञ्चै होइसिन्छ ? खाना खाइस्यो? अलि यता बसिस्यो, मेरो कुरा बुझिस्यो । यस्तै, यस्तै ।
आमाले भन्नुभयो ‘हेर्नुहोस् बाबु, धेरै समय पहिला यस्तै एकजना मान्छे आएको थियो । क्यामेरा पनि बोकेको थियो । सबैले चिन्छन्, लोकप्रिय पत्रकार हुँ भन्थ्यो । त्यस्तो केही हुन्न मनमा लागेका कुरा भनिदिनुहोस् भन्यो । मैले सुखदुःखका कुरा गरें । तर उसले त सबै उल्टो–उल्टो पो लेखेछ । मैले भनेको कुरा त केही पनि लेखेनछ । उसको मनमा लागेको कुरा लेख्न मलाई भेट्न किन पर्यो त ? कोठमा बसेर जे लेखे नि भयो नि !’ म खिस्स हाँसे।
अनि छोरी, नातिनीहरु, आफन्तहरु भएको ठाँउमा जानुहोस् न त…
गएको त हो । अहिले यतै काम छ । बेलाबेलामा जाने–आउने चलिरहन्छ ।
मैले यशोधा पाण्डेसँग मिलेर २०५८ सालमा यो चतरामा श्री रामकुञ्ज अनाथ महिला आश्रम खोलेकी हुँ । म यो आश्रमको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । माया लाग्छ नि । मेरा लागि यो राष्ट्रपति भवनभन्दा ठूलो कुरा हो । मोरङको बाहुनी,
गाउँमा ६ बिगाहा जमिन पनि छ । त्यहाँको उत्पादन यहि आश्रमको लागी प्रयोग गर्छु । वर्षको ३ महिना काडमाडौंको घर र बाँकी समय मोरङको खेती र आश्रममा बित्छ ।
त्यसो भए काठमाडौमा ३ महिना छोरीसग बस्ने गर्नु भएको छ हो ?
हैन, त्यहाँ मेरा अरु आफन्तहरु पनि छन् ।
अब फेरि छोरी भेट्न जानु हुन्न त ?
नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अकोराब प्रदेश नम्बर ४ को साधारणसभा सकियो ।।
२०७५, २७ जेष्ठ आईतवार ०२:०८
संघमा जे भएपनि प्रदेशमा मिलाैं – मुख्यमन्त्री गुरूङ
२०७७, ११ पुष शनिबार ०२:१६
बाल क्लवका सदस्यहरूलाइ नेतृत्व विकास तालिम
२०७५, १३ कार्तिक मंगलवार १४:४१
पालुङटार ७ को च्याङ्लीमा कुमाल संग्रहालय बन्ने ः प्रदेश सरकारबाट यसै बर्ष ५० लाख बजेट बिनियोजन
२०७८, १० श्रावण आईतवार २२:०७
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण निको भई आज १९१ जना घर फर्के
२०७७, २ असार मंगलवार २२:१६